Global Voices teny Malagasy · 29 Novambra 2018
29 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 29 Novambra 2018
Miblaogy mikasika an'i India, NRIs, Bokkywood sy ny Cricket An-dranomandry
Azia Atsimo29 Novambra 2018
Sasany amin'ireo zavatra jerentsika ao anatin'ity fanaovana bango tokana ity ny mpanangona blaogy vaovao, ohatrinona ny mividy trano ao Bangalore, ny NRI, ny Bollywood Anglisy, ny cricket an-dranomandry.
India: Wal-mart, Bangalore ary BarCamp Bangalore II
Sasany amin'ireo lohahevitra jerentsika ao anatin'ny fibangoana an'ity herinandro ity mikasika ny zavatra Indiana rehetra ny Tombontsoam-Pirenena, Wal-Mart, Aterineto, Barcamp, Bangalore sy ny Bollywood.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana29 Novambra 2018
Adihevitra momba ny fifanarahana nokleary India-Etazonia
Nandritra ny volana vitsy lasa izay dia nisy adihevitra mafana tao India momba ny fifanarahana nokleary nataony tamin'i Etazonia. Vahaolana iray nanaovan'ny Praiminisitra Manmohan Singh fandresen-dahatra mafy izany ary niezaka ny hahazo fifanarahana ara-politika.
Ny fifidianana an'i Barack Obama no zava-nitranga be mpijery indrindra tany Inde. Toa i Obama no safidy ho Filoha ho an'ny bilaogera maro any India. Ity misy sombiny vetivety momba ireo fanehoan-kevitra voalohany avy amin'ireo bilaogera any India momba ny dika ara-tantara tamin'ny fifidianana an'i Obama.
Bolivia: Bilaogera notendrena ho ao amin'ny Fitsarana Fifidianam-Pirenena
Amerika Latina29 Novambra 2018
Amin'ny ankapobeny ny firaisamonin'ny bilaogy boliviana manohana ny mpikambana ao aminy. Vao haingana ny bilaogera fanta-daza iray no notendrena hoe amin'ny toerana ambony iray ao amin'ny governemanta boliviana. Raha ny tokony ho izy dia tokony ho maro ny fanohanana sy ny fiarahabana tamin'izany fanendrena vaovao izany saingy...